Tuhi chirongwa chinobvumira Wacom zvishandiso kumhanya paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kugoverwa kweLinux kwawana mukana mumusika, mamwe makambani haatombozviziva uye haagadzi zvigadzirwa zvavo neFree Software mupfungwa. Izvi zvinoita kuti zvimwe zvishandiso zvisaenderane nekuparadzirwa kweGnu / linux kana paine madhiraivha eimba inova ndiyo chete nzira yekuita kuti Hardware ishande.
Izvi zvinoitika nemamwe madhizaini kubva kuWacom, kambani yakazvipira kudhijitari mapiritsi. Wacom ine zvishandiso zvekare zvinoshanda zvakanaka asi izvo zvazvino zvishandiso hazvizivikanwe kana zvine zvakawanda zvisina kufanira.
Ndokusaka ivo vanogadzira Peter Hutterer naBenjamin Tissoires vagadzira chirongwa cheThihi. Iyo Tuhi chirongwa chirongwa chinobatsira vashandisi kuwana yavo Wacom zvishandiso kuti zvishande nemazvo nechero Gnu / Linux kugovera.
Yenguva iyo ichatanga na zvigadzirwa zvemhuri ye Bamboo. Izvi zvigadzirwa ndezvemazuva ano zvinyorwa zvemabhuku zvakaumbwa zvemadhijitari izvo zvinotibvumidza isu kutora zvinyorwa uye kuzvitumira zvakananga kukombuta kana nharembozha iyo iyo pairi. Ivo vanoshandisa kifaa chebluetooth kutumira iyo ruzivo sezvatinonyora. Ichi chinhu chinhu chinonetsa sezvo chisingashande nemazvo neimwe Gnu / Linux software. Iyo Tuhi chirongwa chakagonesa chinyorwa cheGithub Iine kodhi yekodhi yezvigadzirwa zviviri zvemhuri yeBamboo yekambani yeWacom.
Kuuya kwemidziyo kubva kuWacom kuenda kuGnu / Linux ichave iri mberi kukuru kweiyo Penguin inoshanda sisitimu. Sezvo zvishandiso zveWacom, pamusoro pekuzivikanwa nezviuru zvevashandi, zvakare ivo vari mumabhizinesi akadai sekubhanga kana kutengeserana.
Pachine nzira refu yekuenda yezvose zvishandiso zvemhuri yaBamboo kuti zvishande zvakakwana muGnu / Linux asi inhau dzakanaka kuvashandisi veiyi Hardware, nhau dzakanaka dzinoratidzika sedzine mugumo unofadza kana zvinoita sekunge. Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Tuhi chirongwa chinobvumira Wacom zvishandiso kuti zvishande paLinux